Ị ga-agụ akwụkwọ ka ị bụrụ onye nlekọta ụlọ | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maria José Roldan | 26/12/2021 12:44 | Emelitere ka 26/12/2021 12:45 | Job itzọ ọpụpụ
Ọrụ onye nnabata nwere ọtụtụ uru na mgbakwunye na ịbụ nrọ nke ọtụtụ ụmụ nwanyị obodo a. Onye nnabata ahụ nwere ihu ọma ịga njem n'efu wee gaa na ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Otú ọ dị, ọ bụ a pụtara ruru eru ọrụ ebe ọ na-achọ, n'ime ihe ndị ọzọ, ezi ọgwụgwọ na njem nakwa dị ka ịmara otú e si eme ihe na ọnọdụ dị iche iche nwere ike ime ofụri a ụgbọ elu.
N'isiokwu na-esonụ anyị ga-agwa gị kedu ihe ị ga-amụ ka ị nwee ike ịchọ ọrụ dịka onye nlekọta ụlọ.
1 Kedu ihe achọrọ iji bụrụ onye nlekọta ụlọ
2 Uru na ọghọm dị n'ịbụ onye na-elekọta ụlọ
Kedu ihe achọrọ iji bụrụ onye nlekọta ụlọ
Ihe mbụ a chọrọ mgbe ị na-arụ ọrụ dị ka onye nlekọta ụgbọ elu bụ 18 afọ. Enwere ụlọ ọrụ na-ewepụta afọ kacha nta nke afọ 21. N'ihe gbasara oke afọ, ọ dị afọ 35 ugbu a.
Ogologo bụ ihe ọzọ ụlọ ọrụ ụgbọ elu na-achọ mgbe ha na-ewe onye nlekọta ụgbọ elu. Ihe a chọrọ dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na ndị nnabata ga-erute ihe mberede ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ugbu a, onye na-eje ozi ụgbọ elu kwesịrị ịdịkarịa ala 1,57 cm.
N'ihe gbasara ọmụmụ ihe na ọzụzụ achọrọ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu chọrọ maka onye na-elekọta ụlọ, ka ọ bụrụ onye nwe Asambodo TCP Official na inwe ma ọ dịkarịa ala ESO. Enwere ike nweta TCP na ebe ọ bụla aeronautical center nke Ministry of Development kwadoro.
Mgbe ị na-ahọrọ ọrụ dị ka onye na-elekọta ụlọ, ọ dị mkpa inwe ọkwa Bekee dị mma. Ewezuga ya, Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu kpọrọ ihe nke ukwuu ịmara ihe karịrị otu asụsụ.
Ihe ọzọ achọrọ mgbe ị na-achọ ọrụ nke onye na-elekọta ụlọ bụ ịgafe ọtụtụ ule igwu mmiri. Nnwale ndị a gụnyere igwu mmiri ihe dị ka 100 mita n'ihe na-erughị nkeji abụọ na ọkara ma na-egwu mmiri ruo mita asatọ n'ime omimi.
Uru na ọghọm dị n'ịbụ onye na-elekọta ụlọ
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọrụ, onye na-elekọta ụlọ ga-enwe uru ya mana ọ nwekwara ọtụtụ ọghọm na i kwesịrị iburu n'uche. Banyere uru ndị a, a ga-emesi ya ike:
Ihe kacha adọrọ mmasị nke ọrụ dị ka onye nnabata bụ enweghị obi abụọ ọ bụla ihe ị na-eme njem na ebe dị iche iche gburugburu ụwa ị ga-eleta. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ n'anya njem, ọrụ onye nlekọta ụlọ bụ ihe kacha mma maka gị.
Uru ọzọ bụ n'ihi na ọtụtụ ụgbọ elu, na-enye ndị ọrụ ha ọtụtụ ụgbọ elu n'efu na mba ndị ọzọ ma ọ bụ ụgbọ elu na ọnụ ahịa belatara ka ọ bụrụ nke nkịtị.
Ọ bụrụ na ị bụ enyi na enyi na-emeghe, ọrụ nke onye ọbịa Ọ ga-ahapụ gị omenala na-adịghị agwụ agwụ na ndị si mba ọzọ.
Na ọrụ nke onye na-elekọta ụlọ ha na-enwekarị ọtụtụ ụbọchị ezumike n'usoro.
Agbanyeghị, dị ka ọ dị na ụdị ọrụ ọ bụla Enwere ọtụtụ ọghọm dị mkpa ka a rịba ama:
Dịka anyị kwuburu n'elu, ọrụ onye nlekọta ụgbọ elu chọrọ ka ị na-eme njem na-aga n'ihu. ihe nwere ike ọ gaghị ekwekọ mgbe ị na-ebi ndụ nkịtị na inwe ike inwe ezinụlọ.
Ọ dị mkpa igosi na oge ọrụ nke onye ọbịa dị ogologo ma na-adịgasị iche mgbe niile. Nke a nwere ike ibute nnukwu nsogbu n'ikpeazụ. na ụra na nri.
Ọ dị ezigbo mkpa inwe nkà ndị mmadụ ma mara otu esi eme ha. Ọnọdụ erughị ala dị iche iche na-emekarị na ụgbọ elu nke ị ga-ama ka esi eme ya mgbe niile.
N'ọrụ nke onye nnabata, ị ga-enwerịrị akpa akwa njem gị mgbe niile ma dị njikere. Ha nwere ike ịkpọ oku ngwa ngwa ma ga-aga ozugbo.
Na nkenke, ọrụ nke onye na-elekọta ụlọ na-adọrọ mmasị ọtụtụ ndị mmadụ, ebe ọ bụ na ị ga-eme njem gburugburu ụwa wee mara ọtụtụ mba na omenala. N'aka nke ọzọ, a ghaghị ikwu na ihe ha chọrọ adịghị agwụ agwụ, dị ka ọ dị n'ọrụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Ọmụmụ » Job itzọ ọpụpụ » Kedu ihe ị ga-amụ iji bụrụ onye nlekọta ụlọ